Ngaba Uyafuna Ukuba Ngumhlobo KaThixo?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChuvash IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMixe IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTlapanec IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiVenda IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
“Ukuba nobuhlobo obusondeleyo noThixo kukwenza uzive ukhuselekile, kungekho nto uyidingayo, yaye uzinzile. Kuba ngathi uThixo ukhathalele izinto onomdla kuzo.”—UCHRISTOPHER, ITYENDYANA LASEGHANA.
“UThixo uyazibona iingxaki okuzo yaye uba nothando nenkathalo eyodlula leyo ubunokuyicela.”—UHANNAH WASE-ALASKA, E-U.S.A ONEMINYAKA EYI-13.
“Ukwazi ukuba unobuhlobo obusondeleyo noThixo yeyona nto ixabisekileyo nekwenza uzole!”—UGINA, IBHINQA LASEJAMAICA ELINEMINYAKA EMALUNGA NEYI-45.
UChristopher, uHannah, noGina ayingabo bodwa abavakalelwa ngale ndlela. Ehlabathini lonke abantu abaninzi baqinisekile ukuba uThixo ubajonga njengabahlobo bakhe. Kuthekani ngawe? Ngaba uziva usondele kuThixo? Okanye ngaba ungathanda ukusondela kuye? Mhlawumbi uyazibuza: ‘Ngaba ingenzeka into yokuba umntu njee abe nobuhlobo noThixo uSomandla? Ukuba kunjalo, ingenzeka njani?’
UNAKO UKUSONDELA KUTHIXO
IBhayibhile ithi unganabo ubuhlobo obusondeleyo noThixo. Ithi uThixo wabiza uAbraham usolusapho ongumHebhere ngokuthi, “umhlobo wam.” (Isaya 41:8) Phawula nesimemo esimnandi esikuYakobi 4:8 esithi: ‘Sondela kuThixo, naye uya kusondela kuwe.’ Ngenxa yoko, kuyacaca ukuba unganabo ubuhlobo obusondeleyo noThixo. Kodwa ke, ekubeni uThixo engabonakali ‘ungasondela’ njani kuye uze ube ngumhlobo wakhe?
Ukuphendula lo mbuzo, makhe sicinge ngento eyenzekayo xa abantu besiba ngabahlobo. Badla ngokuqala baxelelane amagama abo. Kwaye njengoko bencokola rhoqo, bephalazelana imbilini neemvakalelo, ubuhlobo buyakhula. Yaye xa besenzelana izinto, ubuhlobo buyomelela. Kuyafana ke nangokukhulisa ubuhlobo noThixo. Makhe sibone indlela okufana ngayo oku.